QOOL BIR AH: MW Xasan Sh oo ay hor taallo joojinta arrin uu isagu horay jideeyey (Qiso dhacday) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka QOOL BIR AH: MW Xasan Sh oo ay hor taallo joojinta arrin...
QOOL BIR AH: MW Xasan Sh oo ay hor taallo joojinta arrin uu isagu horay jideeyey (Qiso dhacday)
(Muqdisho) 30 Maajo 2022 – 24-ki Maarso 2022 maalintaan Xamar ka soo baxayay, waxay ishaydu qabatay gabdho 5-6 ahaa oo dhowr tallaabo hortayda diyaaradda ka fadhiistay.
Waa gabdho wada socda, da’ yaraan ka muuqato, make-up iyo isnaashnaash dhabankoodu ka muuqdo. Mid walba waxay gacanta ku haystay baqshad A4 ah.
Labbiska, isqurxinta iyo baqshadda markaan arkay waxaa igu soo dhacay Soomaalidi Maraykanka loo qaadi jiray. In ay dibadda u socdaan ayaa isoo baxday. Inaan xogtooda helo waan jeclaystay laakiin jid aan u maro iima muuqan.
Diyaaraddi ayaan kaga hoobannay Adis. Kaligeey ayaan ahaaye horey ayaan isaga dagdagay. Anoo meel dhexe marayo ayaa waxaa ii yeertay hooyo Soomaaliyeed oo gabar yari la taagantahay.
Gabadhu waxay ka mid ahayd gabdhihi maanta laakiin Markaas sidaas uma aqoonsan. Walwal ayaa ka muuqda. Waa naxsantahay sina u kala daadsan tahay.
Boorsadi gacanta xariggi ayaa ka go’ay oo garabki lama suri karo. Baqshaddi, boorsadi gacanta iyo middii maryuhu ugu jireen ayay gacnaha ku sidataa oo is qabadsiin la’dahay.
Hooyadi ayaa igu tiri “eeddooy gabadha u fiiri diyaaradda ay raacayso meesha ay ka baxayso iyo goorta ay baxayso.”
Adeer xaggeed u socotaa ayaan iri. Jiddah Sacuudiga ayay igu tiri. Boorka ayaan eegay. Goorta iyo gaydka markaan u sheegay, ayaa waxaan arkay in diyaarad kale oo Riyaad u socoto saacad ka dib kacayso halka tan Jiddah 3 saac ka dhimmantahay.
Waxbaa igu yiri canugtu armayba meel kale u socotay. Adeer tigidkaada I tus ayaan iri. Haddaan eegayba Riyaad ayay u socotaa.
Adeer Riyaad u socotaa ayaan iri. Intee waaye Riyaad ayay i tiri iyadoo aad mooddo in ay i aamini la’dahay.
Inaan tilmaamo ayaan damcay laakiin muggaan tilmaanti dhammeeyay ayay tiri “markaan halkaas tago magacyga maa la yeerinaa.”
Waxaa isoo baxday in ay tahay ilma yar oo lasoo habaabiyay. Aniga iyo hooyadi ayaa u istaagnay inaan hubinno in aysan lumin. Boorsadi gacanta ayaan middi weynayd u dhexgalinnay.
Baqshadda waxaa ugu jiro baasaboorki, warqaddi dal ku galka, middi caafimaadka iyo kuwo kale. Safarkaadu baqshaddaan ayuu ku xiran yahay ee meel ha uga tagin ayaan u sharraxnay. Intaan howsha u hayno waa ooyaysaa.
Waxay noo sheegtay in ay la socoto gabdho kale. Waxaan u soconnaa “Jiddah” (Wali Riyaad ma aqoonsana) dadkaan u shaqayn doonno ayaa garoonka nagu sugayo ayay tiri.
Waan tiiraanyooday. Waxaa ii muuqday da’da gabadha oo aan is iri 15-16 mid kood weeye. Qalbi samaanteeda iyo wacaal la’aanta haysa ayaa i damqa.
Waxaa ii sawirmay Carabka ka horreeye ee raba markay guriga ka adeegto inuu isna adeegto ka dibna wiilashiisa uga sii tago.
Habarta uu qabo markay aragto miskiinta oo daal la fadhiisatay inta iskoobbe u qaadato “qum yaa qaxbah” ku haysa ayaa i hortimid!
Waxaan ka fekeray waalidka ilmahaan soo diray waxa ay yihiin. Calool adagaa oo ilmahooda necebaa ayaan is iri.
Haddana waxaa ii muuqday faqriga iyo duruufta haysata. Waxaan arkay hooyo 9 carruur haysata oo meelna aysan wax kasoo galin. Badbaadada 8’da kale in gabadhaanu ku xiran tahay ayaa dhici karta baan is iri.
Yaa eedda leh? Ma waalidka duruuf darteed ilmaha u suuq geeyay? Ma madaxda calooshooda u nool ee dadkaan duruuftooda wax ka qaban waayay? Ma ganacsata dhiigga masaakiinta ka macaashta mise annagoo dhan baa eedda leh oo qof kasta oo naga mid ah halkii ku toosnayd uusan kasoo bixin.
Anigu waxaan qabaa eedda waan u dhannahay.
W/Q: Ibraahim Aaden Shire
Previous articleQISO ANFACAYSA MADAXDA: Maxaa dhacay markii uu Cumar uu dabagal ku sameeyey guri uu geli jirey Abuubakar Al Sidiiq?!!
Next articleRuushka oo cawaaqibkii ugu xumaa uga digey Maraykanka (Tillaabo ay khad cas u arkaan)